ILBC နှင့် အမေ့အိမ် ( မ/ဥက္ကလာ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ILBC နှင့် အမေ့အိမ် ( မ/ဥက္ကလာ )
Posted by Good Idea on Jul 18, 2011 in Opinions & Discussion, Society & Lifestyle | 11 comments
သင်တို့ ၏ သားသမီးများ ILBC, TOTAL, MIS ကဲ့သို့ Int’l School များတွင် Air con ခန်းများ၌ အေးချမ်းစွာ ပညာ သင်ကြားနေကြသကဲ့သို့ ကျနော်တို့၏ သားသမီးများလည်း အမေ့အိမ်ကဲ့သို့ အခမဲ့ ပညာဒါန ကျောင်းလေးများတွင် အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားခွင့်ပြုပါ။
ကျနော်တို့၏ သားသမီးများသည် S’pore, Austria ကဲ့သို့
ILBC, TOTAL, MIS ကဲ့သို့ ပြည်တွင်းရှိ Int’l School များတွင်လည်း
နောက်ဆုံး မိမိတို့ မြို့နယ်အတွင်းရှိ နာမည်ကြီး အစိုးရကျောင်းသို့ပင်
အပ်နှံရန် မတတ်နိူင်သော မိသားစုများမှ ကလေးများဖြစ်ကြပါသည် ။ အချို့ကလေးများဆိုလျှင် ကျောင်းပင် မနေနိူင်ကြပါ ။
လူကြီးမင်းတို့ ၏သားသမီးတစ်ယောက် ILBC တွင် တစ်လ ပညာသင်စရိတ်သည် ကျနော်တို့ အမေ့အိမ်ကျောင်းမှ ကလေး အယောက် ( ၃၅၀ ) ကို တစ်လ ပညာသင်ကြားပေးနိူင်ပါသည် ။
ထိုကလေးများ၏ အနာဂတ်သည် ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်အနာဂတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုကလေးများ အနာဂတ်လှပဖို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေသော အမေ့အိမ် ပညာဒါန အခမဲ့ကျောင်းလေးများကို
ဖိအားပေးခြင်း၊ပိတ်ပင်ခြင်း များ မပြုလုပ်သင့်ပါ။
မ/ဥက္ကလာပ အမေ့အိမ် အခမဲ့ပညာဒါန ကျောင်းလေးသည်
အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကလေးများကို ပညာသင်ကြားပေးနေခြင်း သာဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းများကိုယ်တိုင် လာရောက်လေ့လာကြည့်စေချင်ပါသည်။ အမေ့အိမ် အခမဲ့ပညာဒါန ကျောင်းလေးများသည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် မညီညွတ်ဟု အကြောင်းပြ၍လည်း မတားဆီးသင့်ပါ ။ တာဝန်ရှိလူကြီးများ အပိုင်းမှ ကလေးများရဲ့ အနာဂတ်
အရေးအတွက် အလေးအနက်ထားစဉ်းစားပြီး သင့်တော်မည့် နည်းလမ်းဖြင့် ကူညီပေးသင့်လှပါသည်။
ပညာရှိ လူကြီးလူကောင်းများပီသစွာ သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာသော မေတ္တာ ဂရုဏာစိတ် ထားသင့်လှပေသည်။
မူအသစ်ဖြစ် ကျနော်တ်ို့ တိုင်းပြည်အားပြန်လည် တည်ဆောက်နေသည့် ယခုလို အချိန်ကာလတွင် အတွေးအခေါ် အသစ်များ၊ အကျင့် အကြံအသစ်များဖြစ် ပြည်သူအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှသာလျှင် ကျနော်တို့အားလုံးမျှော်မှန်း သော နိူင်ငံတော်သစ်ကြီးကို
တည်ဆောက်နိူင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
Real rich people in Myanmar do not send their children to ILBC, TOTAL, MIS.
They send their children to Diplomatic school (UK syllabus) & International School (US syllabus).
ILBC, TOTAL, MIS are only for middle class people.
မြန်မာပြည်ကို သိပ်အထင်မကြီးပါနဲ့ ဦးFR ရယ်။ အဲဒီ ILBC တို့ဘာတို့က upper middle class မိသားစုတွေသာ တတ်နိုင်တာပါ။ တော်ရုံတန်ရုံ middle class သားသမီးတွေတက်တယ်ဆိုတာ ကျောင်းသားအများကြီးလက်ခံပြီး ရိုက်စားလုပ်တဲ့ နွေရာသီသင်တန်းမျိုးတွေပါ။
Dear ဦး ကြောင်ကြီး,
If I am not very wrong,
For year 10 student’s school fee & etc,
ILBC, MIEC, YIEC, TOTAL & MIS will cost around4to600000 ks/month only,
Diplomatic school & International School will cost around 10 00000 ks/month.
Some of my friends in Myanmar send their children to Dip & Int schools,
Some even send their children to oversea primary, 2ndary & high schools.
I am sure all of them are not very rich,
let say, they are barely upper middle class.
That’s why I said ILBC, MIEC, YIEC, TOTAL & MIS are for middle class &
Diplomatic school & International School are for real rich person.
Any way, thanks for your feed back.
middle class ဆိုတာ ILBC နဲ့ အမေ့အိမ် ကြားထဲက အခြေအနေပဲ ဖြစ်မှာပါ …
ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး အတွေးတွေ များသွားတယ်။ အပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးတွေ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စေချင်တယ်။
ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူတွေအတွက် ဈေးကြီးကြီးကျောင်းကြီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်…
ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူတွေအတွက် အခမဲ့ကျောင်းလေးတွေ အများကြီး ၇ှိစေချင်ပါတယ်…
ရှိပြီးသားကျောင်းလေးတွေကို ရေရှည်တည်တံ့အောင် ၀ိုင်းကြိုးစားပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးမင်းတွေ တစ်ဆိတ်လောက် စဉ်းစားပေးကြပါဗျာ….
တစ်လောက သတင်းစာထဲမှာ သတင်းတစ်ပုဒ် တွေ့လိုက်တယ်… ဘာတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေး ဆိုလားပဲ… ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်အောင် လုပ်တာကောင်းပါတယ်ဗျာ… ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ကလေး သူငယ်တွေအတွက် ဖွင့်ပေးထားတဲ့ စာသင်ကျောင်းလေးတွေကိုတော့ ပပျောက်သွားအောင် ကျေးဇူးပြုပြီး မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ…
အမေ့အိမ် စာသင်ကျောင်းလေးအပြင် တခြား အခမဲ့ကျောင်းလေးတွေအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကျနော်တို့အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းကူညီ အားပေးကြရအောင်ဗျာ…
Total Kids school cost about 175000Ks per month, exclude 2500ks for lunch.
Now starting from June they adjust the price about 20% more. Now it cost about 210000ks per month.
အင်တာနေရှင်နယ် ကျောင်းတွေကတော့ ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ လက်ခံစရာပါ။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အရမ်း ကောင်း စေချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ဆိုရင် တော့ သိပ်မသေချာပါဘူး။ Diplomatic School ဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ဘူးဗျ။ နောက်တစ်ခု က အင်တာနယ်ရှင်နယ် ကျောင်းက ဆယ်ကျော်သက်တွေက အလွန့် အလွန် ကို အနောက်တိုင်း ဗျောက်သောက်ဆန်တယ်။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား အတွဲ တွေက ဆရာမရှေ့ မှာလဲ နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်ပြီး နမ်းတယ်ဗျ။ သူတို့ ရဲ့ပွဲ တစ်ခုကို တိုက်ဆိုင်လို့ သွား မိရင်း ကိုယ် တွေ့ ကြုံ ဖူးတယ်။ အဲဒီကျောင်းတွေက စာ သင်ရုံ မကဘူး၊ အနောက်နိုင်ငံရဲ့လမ်းသရဲ culture ကိုပါသင်ပေးလိုက်တယ်ထင်ပါရဲ့ ။
အမေ့အိမ် စာသင်ကျောင်းလေး ရဲ့ပြသာနာကို ထိထိရောက်ရောက် ရေးထားတာ မတွေ့ ရဘူး၊ ဘာ့ကြောင့် ဖယ်ခိုင်းတာလဲ၊ ဘယ်သူ ကဖယ်ခိုင်းတာလဲ။ ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ ဖယ်ခိုင်းတာလဲ ဆိုတာ သိရရင် ကောင်းမယ်ဗျ။ နေရာကြောင့် ဆိုရင် အဲဒီရပ်ကွက်လိုမျိုး မှာ နေရာ ငှားပေးနိုင်မဲ့လူတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ မူဝါဒကြောင့်ဆိုရင်တော့ နဲနဲ ခက်သွားမယ်ထင်တယ်။ Good Idea ကို ဆက်ရေးပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဟတ်ပါတယ် အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်း၊ ဒစ်ပလိုမတ်ကျောင်းတွေမှာ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုကို သင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူတယောက်ပြောဖူးတယ် သူ့အသိရဲ့သမီးဆိုရင် အဲဒီကျောင်းမျိုးမှာ အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝကထဲက အကုန်တတ်နေ၊ ညအိပ်ညနေ သွားတတ်နေပါပြီး (စာစုကျက်တယ်ဆိုလားပဲ)။ များသောအားဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများနဲ့တွဲပြီး ဘဝတက္ကသိုလ်က ပညာရပ်တချို့ကို ကြိုတင်လေ့လာဆည်းပူးကြပါသတဲ့…။
ပညာသင်တာကတော့ ဘယ်မှာသင်သင် ကိုယ်တိုင်က တကယ်တတ်မြောက်လိုတဲ့စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်
ဆရာကြီးအောင်သင်းတောင်မှ အင်္ဂလိပ်စာကို ထောင်ထဲမှာသင်ခဲ့ရတာပဲ
ဒီခေတ်က certificate တွေကတော့ တစ်မျိုးပေ့ါ
ပညာရပ်တစ်ခုကို တကယ်တတ်မြောက်ရင်တောင် တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ထောက်ခံချက်ကလည်း သင်တန်းစရိတ်(နာမည်)အလိုက် တာသွားတယ်နော်
ဒီသတင်းလေးဖတ်ပြီး ခံစားလိုက်ရပါတယ် ဘ၀တွေကွာခြားချက်တွေပြသာနာကို ဘယ်လိုအဖြေညိုကြမလဲ